भर्खरै सुटुक्क प्रेम विवाह गरेका स्वप्न सुमनकी जीवनसाथी ज्योत्सना को हुन् ? - Mitho Khabar
भर्खरै सुटुक्क प्रेम विवाह गरेका स्वप्न सुमनकी जीवनसाथी ज्योत्सना को हुन् ?
May 13, 2022 mithokhabarLeaveaComment on भर्खरै सुटुक्क प्रेम विवाह गरेका स्वप्न सुमनकी जीवनसाथी ज्योत्सना को हुन् ?
फ्यानहरु`लाई सर`प्राइज दिँदै गायक स्वप्न सुमनले दुई दिन`अघि आफ्नी प्रेमिका ज्योत्सना योगीसँग लगनगाँठो कसे । कमलपोखरीको एउटा होटलमा आयो`जित सानो समारोहमा परम्प|रागत तवरबाट उनीहरुले लगन`गाँठो कसेका थिए ।
४ वर्षदेखि रिले`सनसीपमा रहे पनि उनीहरु सार्वजनिक`रुपमा खुलेका थिएनन् । स्वप्न सुमनले एका`एक विवाहको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि उनका धेरै लेडी फ्यान`हरु जिल्लिए । खैर, यी गायक`लाई अहिले बधाई र शुभ`कामना सन्देश लिन भ्याइ`नभ्याइ छ ।
युवायुवतीहरु`माझ अत्यधिक क्रे`ज भएका गायक हुन् स्वप्न सुमन । युट्यूवबाट चर्चामा आएका उनले छोटो समयमा लोभ`लाग्दो फ्यान फ`लोइङ कमाए ।स्वप्नको ‘कसरी भनुँ’ बोलको गीत सर्वाधिक हिट छ । ५ वर्षअघि युट्यूवमा रिलिज भएको यो गीतको लिरिकल भिडियोले अविश्वसनीयरुपमा ५ करोड २० लाख भ्यूज बटुलेको छ ।
कुनै पनि नेपाली गीतको लिरिकल भिडि`योले पाएको सम्भ`वत यो सर्वा|धिक भ्युज हो । यस्तै ‘म तिम्रो’ बोलको गीतले पनि २ करोड भन्दा बढी भ्यूज पाएको थियो । स्वप्नले सन् २०१२ बाट संगीत करिअर सुरु गरेका हुन् ।
स्वप्नकी पत्नी ज्योत्सना पनि कलाका`रिता क्षेत्रमै सक्रिय छिन् । उनले ‘म त तिम्रै हुँ’ नामक चल`चित्रमा नायि`काको रुपमा अभिनय गरेकी थिइन्, जुन चलचित्र २०१५ मा रिलिज भएको थियो । चलचित्रले व्या|पारिक सफलता हासिल नगरेका`ले उनी चर्चामा आउन सकिनन् । ज्योत्सनाले मनोज पण्डित निर्देशित चलचित्र ‘एक’ मा पनि अभि`नय गरेकी छिन् । यो चलचित्र ओटीटी प्लेटफ`र्ममा रिलिज गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय उनी म्युजिक भिडियो तथा मोडलिङमा सक्रिय छिन् । एमबीए`सम्मको अध्ययन गरेकी ज्यो`त्सना पार्ट टाइममा आइइए`लटीएसका विद्यार्थीहरुलाई पढाउने पनि गर्छिन् ।
लभ क्लो`जअप नामक वेव सिरिजमा स्वप्न र ज्योत्सना`ले सँगै अभिनय गरेका थिए । प्रेमी–प्रेमिका`को रुपमा नखुले पनि स्वप्नले ज्योत्सनासँग थुप्रै टिकटक भि`डियो बनाएका छन् । नेपाल प्रेस
मौन अवधिमा बोले स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार बालेन शाह
पैसा बाँड्दा बाँड्दै सांसद नविना लामालाई स्थानीयले घेरे